शिशिर भण्डारीले किन नेपाल छाड्दैछन् त ? – osnepal tv
शिशिर भण्डारीले किन नेपाल छाड्दैछन् त ?
काठमाडौं । सञ्चरकर्मी तथा नायक शिशिर भण्डारी नेपाल छोडेर अष्ट्रेलिया जाने पक्का भएको छ । बिगत केहि बर्ष देखी सामाजिक कार्यमा अग्रसर भएका भण्डारीले नेपाल छोडने भएपछि सबै अच्चममा परेका थिए । उनी किन नेपाल छाडेर अष्ट्रेलिया जादै छन् त ? यो सबैको चासोको विषय हो ।
भण्डारी सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर भएको कारणले गर्दा उनी अष्ट्रेलिया पनि सामाजिक कार्य गर्नकै लागी जान लागेको कुरा शिशिर स्वयमलेनै बताएका छन् । नेपालमा राम्रो काम गरेको कारणले गर्दा उनलाई अष्ट्रेलिया बोलाएको र त्यहाँ गएर पनि कसरी सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुने र समाजमा कसरी राम्रो काम गर्ने भन्ने कुराको अनुभव लिन र विशेषगरी सामाजि कार्य गर्नकै लागी जान लागेको कुरा शिशिरले जानकारी दिएका छन् । अष्ट्रेलिया भ्रमणमा जादा त्यहाँबाट उठेका सम्पूणै पैसाहरु फेरी नेपालमै ल्याएर सामाजिक कार्य गर्ने कुरा बताएका छन् ।
अष्ट्रेलियामा धेरै नेपालीहरु रहेकाले गर्दा, ती नेपालीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको छर्लङग् जानकारी दिने समेत बताएका छन् । ओ एस नेपालसँगको विशेष कुराकानिमा शिशिरले अष्ट्रेलिया जानुको कारण अझै राम्ररी खुलाएका छन् । बाकि तलको भिडियोमा हेर्नुहोस् ।
Previous article अहिले सम्मकै चर्चित देउडा गीत ‘धन्न मेरा अछाम जिल्ला’
Next article ‘दशैं तिहार साँच्चै’ रमाईलो हुन्छ भन्दै यस्तो गीत गाएपछि
अहिले सम्मकै चर्चित देउडा गीत ‘धन्न मेरा अछाम जिल्ला’
‘दशैं तिहार साँच्चै’ रमाईलो हुन्छ भन्दै यस्तो गीत गाएपछि